October 2019 – Peak Point
By: Tin Yadanar Htoon	Event
ဘာသာပြန်ဝါသနာရှင်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်နေ့အခမ်းအနားကို လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီခွဲကနေ ၁၂ နာရီထိ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေကွန်ရက်နဲ့ Yangon Translation Society တို့ဖြင့် ပူးပေါင်းကာ Peak Point Academy က ဦးစီးကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတတွေကို ဝေမျှပေးသွားမယ့်အပြင် နာမည် ကျော်ဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့ ဆရာဟိန်းလတ်၊ ရဲမြလွင်၊ ဒီနိုဗို၊ တော်ကောင်းမင်းနဲ့ ရတနာတို့က ဘာသာပြန်စာပေနဲ့ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဟောပြောဆွေနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်နေ့အခမ်းအနားကတော့ သမ္မာကျမ်းစာကို ဘာသာပြန်ဆိုသူ “စိန့်ဂျာရုမ်း” ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ပွဲမှာ ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်အနေနဲ့ […]
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ email, letter ရေးနည်းများကို အချိန်တိုအတွင်း နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ ရေးသားတတ်စေရန် လက်တွေ့ကျတဲ့ နည်းများနဲ့ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေတက်သင့်လဲ ? ? ? လုပ်ငန်းခွင်မှာ email , letter ရေးသားနေသူများ၊ Meeting minute နှင့် report များကို နည်းစနစ်မှန်စွာ ရေသားတတ်လိုသူများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ မန်နေဂျာနှင့်supervisor များCommunication Officer များအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ ဘာတွေသင်မှာလဲ ? ? ? လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း email , letter များကို အချိန်တိုအတွင်း ထိထိရောက်ရောက် ရေးသားတတ်စေဖို့ အဓိကထားသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစာရေးသားရာတွင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်များကိုပါ ဝေမျှပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မလဲ? ? […]
By: Tin Yadanar Htoon	Education
English vocabulary တွေကို လေ့လာချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် Peak Point Academy ကနေ ဝေါဟာရအသစ်တွေကို ပိုမိုလေ့လာနိုင်မယ့် activity တစ်ခု ထပ်မံစီစဉ်ထားပါတယ်။ English language ကို ကျွမ်းကျင်စွာသုံးပြုတတ်ဖို့က vocabulary တွေကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လေ။ မှတ်ရခက်တဲ့ vocabulary တွေကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ Game တွေဆော့ရင်း တူတူလေ့လာကြမယ်။ Activity တွေမှာ ကိုယ်သိထားတဲ့ Vocab တွေကို အချင်းချင်း မျှဝေဖလှယ်ကြရင်းနဲ့ English vocabulary တွေကိုလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ event ပွဲလေးကို အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၁၀ နာရီခွဲမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီ အထိPeak Point […]